GP International Travel and Tours: ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ် အဖြစ် စာရင်းဝင်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် အန်ကောဝပ် ကို သွားလည်မယ်
ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ် အဖြစ် စာရင်းဝင်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် အန်ကောဝပ် ကို သွားလည်မယ်
Journey to the East လို့ပဲ ပြောတော့မလား။ ဒီတခါ ရွှေမြန်မာတွေကို နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ဘက် ထိုင်းနိုင်ငံ အနှံ့ online ကနေ virtual tour အလည် ပို့ပြီးတဲ့နောက် ဖောက်လို့ မပြီးနိုင်တဲ့ အာရှ အဝေးပြေး လမ်းမ ကြီး အတိုင်း အရှေ့ဘက်က ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံကို အ၀င် အရင်ရောက်တဲ့ Siamreap မြို့ ကလေးက ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ် အဖြစ် စာရင်းဝင်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် အန်ကောဝပ် ကို အလည်ပို့ဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စား ကြမယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မြန်မာတို့နဲ့ မစိမ်းလှတဲ့ လူမျိုးတွေ နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေကို သွားရောက် လည်ပတ် ရတဲ့ အတွက် ယဉ်ကျေးမှု ချင်း သိပ်မစိမ်းလှတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံထဲက ရှမ်းလူမျိုး များရဲ့ အနွယ်ဖြစ်တဲ့ ထိုင်းလူမျိုးများ နေထိုင်ရာ နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံထဲက မွန်တို့ရဲ့ အနွယ် ခမာ လူမျိုးများ ကြီးစိုးတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
ခမာ လူမျိုး များဟာ ၉ ရာစု ကနေ ၁၅ ရာစု အကြား မှာ အရှေ့တောင် အာရှ တခွင်မှာ ဘုန်းမီး နေလ တောက်ပခဲ့ ကြပါတယ်။ တိုင်းပြည် တစ်ပြည်မှာ စီးပွားရေး လူမှုရေး အင်အား သိပ်တောင့် လာရင် အနုပညာ၊ ဗိသုကာ လက်ရာနဲ့ နိုင်ငံသား များရဲ့ ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေး ထိပ်တန်း ရောက်လာတာ ပြောစရာ မလိုအောင်ကို သမိုင်းက သက်သေ ပြပြီး သားပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့က အန်ကောဝပ်ကို တည်ဆောက် ခဲ့ကြ ပါတယ်။
အန်ကောဝပ်က ဘာကြောင့် ကမ္ဘာ ကျော်ခဲ့ရ တာလဲ။ ဘယ်လို သမိုင်းကြောင်း နောက်ခံတွေ ရှိလို့လဲ။ သူ့ရဲ့ ဗိသုကာ လက်ရာ ကရော ဘယ်လို ထူးခြား ဆန်းကြယ် မှုတွေ ရှိလို့လဲ။ သွားလေ့လာ ကြည့်ရအောင် နော်။
Posted by gpgroup at 11:49 PM
Labels: ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ
i have never been there . . i want to visit there
i really want to know Thai boxing,Burma boxing,cambodia boxing.Who start this?Thai lie to world.They r original.They moved to there from china after pagan.we can see boxing pictures at pagan.Ankor has too.Pagan isalittle earlier.Can u find out who started this?Let the world know.Right now Thai boxing is top at world market as they can do propagander.
Whataconcidence. check this out www.mandalayinn.com
ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ် အဖြစ် စာရင်းဝင်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် အန်ကောဝ...